Maamulka Jubbaland oo sheegay in ay dileen in ka badan 10 Al-shabaab - Halbeeg News
Maamulka Jubbaland oo sheegay in ay dileen in ka badan 10 Al-shabaab
BELED XAAWO(HALBEEG)- Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Jubbaland ayaa weerar ku qaaday deegaanno ku yaalla duleedka magaalada Beled Xaawo halkaa oo ay saldhigyo ku lahaayeen xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab.
Taliyaha ciidanka Daraawiishta Jubbaland Jamaal Xasan Farey ayaa sheegay in ciidankooda ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dagalyahannada Al-Shabaab.
Taliyaha ayaa sheegay inay ka war heleen dhaq dhaqaaqyo ciidan oo Al-Shabaab ay ka wadeen inta u dhaxeysa Doolow iyo Beled Xaawo, sidaasina ay ciidankoodu weerarka u qaadeen.
Taliyaha ayaa sheegay in dagaalka ay ku dileen illaa 11 dagaalame, isla markaana ku gubeen gaadiid dagaal, sidoo kale waxaa uu xusay in dhankooda dagaalka uga dhimatay shan askari, halka 7 kale oo uu Sarkaal uu ku jiro uu ku dhaawacmay.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo, oo isna dhankiisa ka warbixiyay weerarkan xalay ka dhacay Gedo ayaa sheegay in maalmihii u danbeeyay ay cabashooyin kaga imaanayeen shacabka ku nool deegaanadan oo ay ka ku dhuumaaleysanaayeen xoogag ka tirsan Al-shabaab.
Wasiirka Gaadiidka Soomaaliya “Diyaarad aan ruqsad naga heysan kama soo degi karto garoomada Soomaaliya”